Ngathi - Shandong Kunda Steel Co., Ltd.
Inkampani yethu yinkxaso yeLaiwu Steel kwaye yasekwa ngo-2010 ngemvume ye-Bureau of Industry and Commerce. Ngenkunzi eyimali ebhalisiweyo ye-RMB 1 yezigidigidi, yinkampani yokwakha ekhokelayo eneempawu zesakhiwo sentsimbi e-China.
Sigxininisa ekuveliseni iipleyiti zensimbi ezinxibayo, imo yentsimbi enganyangekiyo, iipleyiti zentsimbi, iipleyiti zentsimbi ezinamandla aphezulu, iipleyiti zokudibanisa ezinganyangekiyo, iipleyiti zetanki, iipleyiti zeenqanawa zoxinzelelo oluphezulu, kunye neepleyiti zensimbi yenqanawa.
Siyi-arhente yeefektri zentsimbi edumileyo e-China.Singaba yi-100% yokuqinisekisa umgangatho wempahla yethu.
Okwesibini: Sineziko lethu lokuqhubekeka, elinokunikezela ngenkonzo eyenziwe ngokwezifiso njengokugoba, ukuwelda, ipolishi, unyango lwe-rust, kwalenza.
Okwesithathu, Sinama-2000tons angaphezulu kwe-2000 esitokhwe, oko kuthetha ukuba lixesha lokuhambisa kwiintsuku ezingama-3-5 kuphela.
Okokugqibela, inkampani yethu yasekwa ngo-2010, ke sineminyaka elishumi yamava kushishino ngentsimbi. Ngokuqinisekileyo sinokubonelela ngenkonzo yobungcali kuwe.
Shandong Kunda Steel Co., Ltd. Ifunyanwa kwisixeko saseLiaocheng, kwiphondo laseShandong, esi sixeko sihle sithweswe isithsaba njenge-ental Oriental Venice ＂. Liaocheng kwintshona ye Shandong kwiphondo, 200Km South ukusuka Beijing City, 100Km entshona ukusuka Jinan City.Jiqing Expressway ukunqumla isixeko ukusuka eMpuma ukuya West; Beijing-Kowloon Railway ukubaleka nangona North ukuya South, baxhamle imeko yezothutho lula, Liaocheng ukukhula ngokukhawuleza kwaye kwasekwa iziko elikhulu lokuhanjiswa kwentsimbi eMantla e-China.
Shandong Kunda Steel Co., Ltd. yasekwa ngo-2006, ukuvelisa umbhobho ingenamthungo kunye kumbhobho abandayo zoba.
Ngo-2010 ebhalisiweyo yaseka inkampani Laiwu Steel Liaocheng Sales Branch, benza ukuthengisa Wear Resistant Steel Plate.
Inkampani yaseKunda Steel ivume ukusekwa yiZiko lezoRhwebo kunye nezoRhwebo kwi2014, ebandakanyeka ekwenzeni ishishini lesitokhwe, kubandakanya imveliso yentsimbi kunye nekhabhon yentsimbi, ipleyiti yesinyithi, umbhobho kunye nebar engqukuva.
Ngo-2016 waseka iqela loshishino International. 6 inkonzo yomntu kubathengi angaphandle.
Ngo-2016, kusekwa insimbi umbhobho welding mveliso, ukuvelisa ngeenxa zonke, uxande kunye nombhobho isikwere.
Ngo-2017, kusekwe umzi mveliso okhokelayo, imveliso ephambili ishiti ekhokelayo, umnyango okhokelayo, iglasi ekhokelayo, ifaskoti ekhokelayo njalo njalo.
Ngo-2018, kusekwa mveliso Ukutshiza, ukuthenga uqhumiso entsha kunye nomatshini ukupeyinta umbhobho, ipleyiti njalo njalo.
Ngo-2019, i-workshop ye-CNC yasungulwa, kuthengwa umatshini wokusika i-fiber entsha, ukugoba umatshini, umatshini wokumba, umatshini we-saw.
Ngo-2020, iqela lezoshishino lamazwe ngamazwe liba ngamaqela amabini ama-3.
Ngoku i-Shandong Kunda Steel Co., Ltd. unokubonelela NGOKUPHELELEYO KWENKONZO, ukusukela kwizinto zokugaya ukuvelisa ukugqiba imveliso, kubandakanya ukunxiba ipleyiti yentsimbi enganyangekiyo / iMo yeplate yeNsimbi / Ukomelela okuphezulu kweCarbon Steel Plate / i-Stainless Steel / iAluminiyam / iBrass / ipleyiti / ibha ejikelezileyo / ibha ye-engile / ibha ethe tyaba / iprofayile Zonke ezi zinesitokhwe sobungakanani obuqhelekileyo, iitoni ezingama-2000, iipayipi ezingamawaka ayi-1000 njalo njalo.
Ngomxholo we-＂Qhubeka uphucula, u-Win-win Cooperation＂, kwaye wenziwe ngomgangatho othembekileyo nasemva kwenkqubo yokuthengisa, uKunda wazuza igama elihle kubathengi ekhaya nakumazwe aphesheya.Siyakwamkela ngokunyanisekileyo ukuba uze kwinkampani yethu uxoxisane ngezoshishino kwaye wenze impumelelo enkulu kunye !
2020, amaxabiso wentengiso yentsimbi yase China aya fa ...
Umbutho wezoQoqosho oBanzi wezoQoqosho ...
Abathengisi ngentsimbi kunye noshishino ngaphakathi ngaphakathi ...
Idilesi: 2F, i-Contemporary International Building, iSithili saseDongchangfu, iLiaocheng, iShandong, China